Akụkọ - Teknụzụ Newyea wepụtara ihe ngosi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Shanghai International Charging Facilities 14
Ebe chaja EV
Ụdị chaja 2
Ikuku chaja EV
3.7KW Ikuku Nchaji System N'ihi Ụgbọ ala
Sistem Nchaji Ikuku 30KW
Sistem Nchaji Ikuku 7KW Maka ụgbọ ala
Chaja ikuku na obere ike
Ikuku chaja chaja
Ike mkpanaka ikuku ikuku abụọ
Ike chaja ikuku ikuku
Ikuku chaja na Sound Box
Ikuku Nchaji Ikuku
Onye na -anabata chaja ikuku 15W
5W Na -ebunye Mgbawa, Otu eriri igwe
Akwụkwọ & Patent
Arịa ọgụgụ isi
Teknụzụ Newyea wepụtara ihe ngosi ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke 14 nke Shanghai
N'August 26, teknụzụ Newyea wepụtara ihe ngosi ụlọ ọrụ Shanghai International Charging Facilities 14 nke Shanghai nwere ngwaahịa ikpo ọkụ smart isii na usoro ọrụ nchaji dị iche iche nwere ọgụgụ isi.
N'ụbọchị mbụ nke ihe ngosi ahụ, emebere ọgbakọ mmepe ụlọ ọrụ Shanghai New Energy Automobile na chaja ụlọ n'ime ụlọ ọgbakọ M27 Shanghai New International Expo Center E4 Pavilion! Saịtị nzukọ, nke a maara dị ka '' Academy Award '' nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ, emume nturu ugo "Golden Pile Award" nke emere n'otu oge, teknụzụ Newyea jiri ike nke aka ya merie ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ iri kacha akwụ ụgwọ na 2020 nke China.
Newyea anọwo na -agbaso ụkpụrụ 'pragmatic ọhụrụ na -elekwasị anya nke ọma' 'ụkpụrụ, nyocha na mmepe na ngwaahịa na afọ ojuju ndị ahịa. Onyinye "Golden Pile Award 2020 nke ụlọ ọrụ ihe nrụpụta ụlọ iri kacha elu nke China", abụghị naanị Newyea nke ikike sayensị na teknụzụ, ikike mgbanwe ikike ọgụgụ isi nwere nnwere onwe na nkwenye, kamakwa Newyea nke sayensị na teknụzụ kpaliri na mkpali. Teknụzụ Newyea ga -aga n'ihu na -enye ndị ahịa ngwaahịa ngwaahịa ọhụrụ na azịza ha, na -aga n'ihu na -akwalite ma na -emekọ ihe ọnụ iji nye ndị ahịa ngwaahịa nzaghachi na azịza ahaziri iche.
N'ehihie nke 26th, na 2020 Shanghai New Energy Automobile and Charging Facility Industry Development Forum, Ren Lianfeng, onye isi teknụzụ nke Xinpye Group, mere nkesa siri ike nke "Outlook na nchikota chaja ikuku na autopilot", ịkekọrịta na na -atụgharị isi ihe mgbu na -akwụ ụgwọ nke ngwaahịa autopilot dị ugbu a, uru nke chaja ikuku na autopilot, yana teknụzụ chaja ikuku nke Newyea, azịza na ikpe.
Ren Lianfeng rụtụrụ aka na otu n'ime isi ihe mgbu nke ngwaahịa ịnya ụgbọ ala ugbu a, dị ka ụgbọ ala na-anya onwe ya na robots nwere ọgụgụ isi, bụ na ụzọ ịkwụ ụgwọ dị ugbu a na-eweta nnukwu ihe egwu na enweghị nsogbu na chaja na gburugburu ebe siri ike. Nchikota chaja ikuku na robot nwere ọgụgụ isi na autopilot nwere ike idozi nsogbu nke ụdị chaja dị ugbu a na akpaaka nke akụrụngwa nwere ọgụgụ isi, ma nye ohere imebe nnwere onwe maka robot nwere ọgụgụ isi na akụrụngwa autopilot. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike idozi mgbakasị ahụ na ihe egwu zoro ezo nke ịchaji ma melite mmegharị nke gburugburu chaja.
Na emume a, teknụzụ Newyea abụghị naanị dọtara mmasị nke ọtụtụ ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ, kamakwa ha lekwasịrị anya na mgbasa ozi dị ka ndị na -eweta ụlọ ole na ole na -enye azịza chaja nwere ọgụgụ isi maka ụgbọ ala eletrik nwere wired + wireless.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ya na kọlụm "Ogo" CCTV, Maazị Jin Quan, osote onye isi oche nke Newyea Group, rụtụrụ aka na "Ogo ngwaahịa bụ isi nkuku nke ịga nke ọma ụlọ ọrụ, na imeziwanye ogo ngwaahịa bụ ntọala nlanarị na mmepe ụlọ ọrụ. Newyea na -ejikwa ogo ngwaahịa? "
Huang kwuru na Newyea nwere ndị otu egwuregwu zuru oke, mmejuputa iwu nke ISO9000 、 ISO14000, sistemụ njikwa mma ISO18000, ngwa nnwale zuru oke dịka ụkpụrụ mba si dị, akụrụngwa ịka nká, akụrụngwa ịme ụgbọ ala, akụrụngwa ịme batrị, ngwaahịa dị usoro mmepụta na tupu ụlọ ọrụ ahụ ga -enyocha nke ọma.
N'iburu n'uche atụmatụ mmepe Newyea maka afọ 3-5 na-esote, Huang nyekwara azịza doro anya n'aha ụlọ ọrụ ahụ. Companylọ ọrụ ahụ ga -aga n'ihu na -akwalite ebumnuche ụlọ ọrụ nyocha nke "iwere usoro nrụpụta ihe dị ka isi, na -etinye onwe ya n'ịchọpụta na itinye usoro ike ikuku, ịzụlite ndị isi na ndị ọchụnta ego na ịkwalite mmepe akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze". N'ikpeazụ, ọ ga-etolite etiti ihe ọhụrụ klaasị mba ụwa, bụrụ ugwu ugwu agụmakwụkwọ na teknụzụ, mmeghe talent na oke ugwu ọzụzụ, nnabata ụlọ ọrụ na ngosipụta akụ na ụba dị elu, na-arụ ọrụ dị mkpa na ihe ọhụrụ na mmepe mba, yana n'ọtụtụ azụmahịa. na mmepe, Newyea kpebisiri ike ịghọ ụlọ ọrụ akara aka n'ọhịa nke chaja ikuku ụgbọ ala n'ime afọ atọ, n'ime afọ ise ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka ikuku chaja ikuku ụgbọ ala.
Dị ka ụgbọ ala eletriki eletrọnịkị ikuku na -enweghị eriri + nyocha na mmepe sistemụ nwere ọgụgụ isi, mmepụta, njikọta ụlọ ọrụ, teknụzụ Newyea abanyela n'ọtụtụ obodo gburugburu ụwa karịa ọrụ 20 chaja. N'ọdịnihu, Nkà na ụzụ Newyea ga na-agbaso ụkpụrụ nke "imepụta ihe ọhụrụ, gbado anya na ịdị mma, ịrụsi ọrụ ike na nraranye, imekọ ihe ọnụ mmeri", n'ụzọ niile iji mepụta uru maka ndị ọrụ dị ka mmalite, teknụzụ ọhụrụ nkwado, iji nye ndị ọrụ ihe nchekwa nchekwa dị mma ma dịkwa mma maka ụgbọ ala eletrik, yana ngwaahịa ike ka mma, mee ka mbata nke oge ọhụrụ nke ike nwere ọgụgụ isi, yana ndị mmekọ ụwa iji kwalite nhazi ụgbọ njem nwere ọgụgụ isi na njikọta ume nwere ọgụgụ isi na mmepe nke usoro ọhụrụ!
Banyere Teknụzụ Newyea - Teknụzụ Newyea bụ ụlọ ọrụ ewepụtala, mepụta ma rụọ ọrụ sistemụ ikuku cha cha + wired nwere ụgbọ ala eletrik na mbụ na China. Companylọ ọrụ ahụ na -elekwasị anya na ngụkọta ngụkọta nke ịkwụ ụgwọ ọgụgụ isi maka ụgbọ ala eletrik. Ka ọ dị ugbu a, o nwere usoro ikpo ọkụ nke nwere ọgụgụ isi, gụnyere ikpo ikuku ikuku jikọtara ọnụ, ikpo DC na -agbanwe agbanwe, ikpo ihe na -akwụ ụgwọ mgbasa ozi, AC, ikpo chaja ekwentị, ụgbọ ala na -ebugharị ekwentị, mgbidi DC. N'okpuru usoro atụmatụ ụgbọ ala ike ọhụrụ yana amụma mmepe nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ akụrụngwa ọhụrụ, teknụzụ Newyea ewepụtala ụdị ọrụ azụmaahịa dị iche iche, ngwaahịa ahaziri iche na azịza iji jee ụdị akụ na ndị ahịa na -emekọ ihe ọnụ.
Dị ka onye na-eweta azịza ịkwụ ụgwọ nwere ọgụgụ isi maka ụgbọ ala eletrik, Newyea Teknụzụ na-eji akụrụngwa chaja zuru oke dị ka usoro maka njikọta akụrụngwa na akụrụngwa, na-ejikọ ike, ozi na njikọ bara uru nke ụgbọ ala eletriki eletriki eletriki na ntanetị. na -ejikọ akụrụngwa, data na ọrụ nke ụgbọ ala eletriki na ụgbọ njem nwere ọgụgụ isi.
Oge ezipụ: Jul-30-2021
Mepee: 8:00 AM - mechie: 17:00 PM
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.
Adress: 11F, Hesheng Building No. 8, Jinshan Road, Siming District Xiamen, China
Alaka otu nke Xiamen NEWYEA Group w ...
NEWYEA na -enyere Evergrande Xingluo charg ...
Kọmitii Nchọpụta Mmepe Mba ...
A kpọrọ NEWYEA Group ka ọ bịa nnọkọ 20 ...
Teknụzụ Newyea wepụtara Shang nke 14 ...
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, biko kpọtụrụ anyị ozugbo!
Copyright - 2011-2021: Ikike Niile Echekwabara.